Imikhiqizo Abakhiqizi - China Imikhiqizo abahlinzeki nefektri
Izici zobuchwepheshe eziyinhloko kanye nokusetshenziswa: Ngendlela yesimanje yokwakhiwa kwe-CAD, inokusebenza okuhle kakhulu kwe-hydraulic, ukusebenza kahle okuphezulu nezinga lokugqoka eliphansi. Indawo yokugeleza inamandla, ukusebenza okuvimbela okuhle, ukusebenza kwe-cavitation kuphakeme; Uphawu oluhlanganisiwe nophawu lomshini olunendawo yokuhambisa nokusiza nokupakisha kuyamukelwa ukuqinisekisa ukuthi akukho ukuvuza kwesilayidi. Idizayini yokwethenjelwa iqinisekisa ukuthi isikhathi sokusebenza esingenaphutha (MTBF) somshini wonke sithuthukiswa kakhulu. Sebenzisa i-lubric engavamile ...
Iphampu yokuphakamisa okuphezulu i-300ZGB
Amandla okonga slurry pump150YZJ
Main izici zobuchwepheshe kanye nezicelo: YZJ uhlobo futha kuyinto isigaba esisodwa, ukuncela single, cantilever ovundlile centrifugal slurry futha. Iphampu isebenzisa i-international advanced solid-liquid phase-flow flow theory, ngokuya ngomgomo wokuklanywa kokulahlekelwa okuncane, i-geometry yokugaya okuthwele ngokuhambisana nesimo sokugeleza okuphakathi, ukunciphisa i-eddy yamanje kanye nomthelela obangelwa yi-hydraulic yendawo ukulahleka kanye nokulahleka kwe-Cheng Shuili, ngaleyo ndlela kunciphisa ukugqoka kwendandatho, kuthuthukise i-hy ...
Amandla okonga slurry pump 200YZJ
Iphampu ecwilisiwe 40YPV
Izici zobuchwepheshe eziyinhloko kanye nokusetshenziswa: Y - thayipha ipompo eliketshezi lepompo ye-slurry eyi-centrifugal mpo, egxiliswe kuketshezi, esetshenziselwa ukuhambisa izinhlayiya ezicasulayo, ezimangele, ukuminyana okuphezulu kwesilayidi. Ayidingi noma iyiphi shaft seal namanzi shaft seal, futhi ingasebenza ngokujwayelekile ngaphansi kwesimo sokuncela okunganele. Isetshenziswa kabanzi ekusetshenzisweni kwensimbi, izimayini, uphethiloli, imboni yamakhemikhali, amalahle, amandla kagesi, ezokuthutha, ukudonswa komfula, izinto zokwakha nobunjiniyela bakamasipala ...
Iphampu ecwilisiwe 65YQV